Different types of condoms - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သငျ့ပတျဝနျးကငျြက ဆေးဆိုငျ၊ စတိုးဆိုငျ၊ မီနီမတျကကျနဲ့ ကှမျးယာဆိုငျအခြို့မှာ ကှနျဒုံးအမြိုးအစား အစုံစုံအဖုံဖုံကိုတှရေ့မှာပါ။ အတျောမြားမြားကတော့ ကှနျဒုံးဖွဈရငျရပါတယျဆိုပွီးဝယျသှားတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီကှနျဒုံးတှမှောအမြိုးအစားကှဲပွားမှုတှရှေိပါတယျ။ ဒါတှကေိုလလေ့ာကွညျ့ကွရအောငျ
၁. ရာဘာစေးဖွငျ့ပွုလုပျသော Condom (Latex Condoms)
လကျရှိအသုံးအမြားဆုံးကှနျဒုံးအမြိုးအစားပါပဲ။ ရာဘာစေးနဲ့ပွုလုပျတဲ့ကှနျဒုံးတှဟော ကိုယျဝနျမရအောငျ အကာအကှယျတားဆီးရာမှာရော လိငျမှုဆိုငျရာကူးစကျရောဂါမြားမဖွသျအောငျပါ အကောငျးဆုံးကာကှယျပေးနိုငျတဲ့အတှကျ ဈေးကှကျမှာအသုံးအမြားဆုံးပဲဖွဈပါတယျ။
၂. ရာဘေးစေးဖွငျ့ပွုလုပျခွငျးမဟုတျသောကှနျဒုံး (Non Latex Condoms)
အခြို့သူတှဟော ရာဘာစေးနဲ့ထိတှပေ့ါက ဓာတျမတညျ့မှုဖွဈပွီး ယောငျရမျး၊ ယားယံခွကျးတှဖွေဈတတျပါတယျ။ ဒီလိုဖွသျတတျသူတှအေတှကျ Polytheneနဲ့ပွုလုပျတဲ့ Non Latex ရာဘာစေးမပါသောကှနျဒုံးတှကေိုထုတျလုပျကွပါတယျ။ Polytheneဟာ Latexရာဘာသားလောကျမခိုငျခံ့တာကွောငျ့ ပေါကျပွဲတတျပွီး ကိုယျဝနျကို ၉၅ရာခိုငျနှုနျးခနျ့သာကာကှယျနိုငျပါတယျ။
၃. သုကျကောငျသစေသေောကှနျဒုံး (Spermicidal condomd)
အခြို့ကှနျဒုံးတှမှော သုကျပိုးကိုသစေသေောဓာတုပစ်စညျးထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ ဒါဟာ အခနျ့မသငျ့လို့ကှနျဒုံးပေါကျပွဲပါက စိတျခရြစဖေို့ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့ကာကှယျအားဟာ ၉၇ရာခိုငျနှုနျးသာရှိတာမို့ Latex ရာဘာကှနျဒုံးသီးသနျ့တှထေကျ ကာကှယျအားလြော့နညျးတာမို့ Non Latexမြားမှာ တှဲဖကျအသုံးပွုကွတာမြားပါတယျ။
၄. အမြိုးသမီးသုံးကှနျဒုံး (Female Condoms)
ကှနျဒုံးဆိုတာ အမြိုးသားတှအေတှကျသာမဟုတျဘဲ အမြိုးသမီးတှမှောလညျးအသုံးပွုနိုငျတဲ့ Female condomsတှရှေိနပေါပွီ။ အမြိုးသမီးသုံးတှဟော အမြိုးသားသုံးကှနျဒုံးတှလေောကျ ကာကှယျမှုရာခိုငျနှုနျးနညျးပမေယျ့ (၉၅%) အကာအကှယျမသုံးခငျြတဲ့အမြိုးသားအဖျောနဲ့ဆကျဆံမယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ဘကျကစိတျခရြအောငျ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။
၅. ခြောဆီပါဝငျထညျ့သှငျးထားသောကှနျဒုံး ( Lubricated Condoms)
ကှနျဒုံးအခြို့မှာ ခြောဆီထညျ့ပေးထားရတဲ့အကွောငျးရငျးကတော့ လိငျဆကျဆံရအဆငျပွစေရေုံရညျရှယျခကျြတဈခုတညျးအတှကျမဟုတျပါဘူး။ ခြောဆီပါတဲ့အခါ ကှနျဒုံးမကျြနှာပွငျပှတျတိုကျမှု ခြောမှတေဲ့အတှကျ တျောရုံနဲ့ပေါကျပွဲခွငျးမရှိတော့ဘဲ အပွညျ့အဝကာကှယျမှုရစလေို့ပဲဖွဈပါတယျ။
၆. ပါးပါးလေးအသုံးပွုခငျြသူမြား ( Ultra Thin)
အခြိုကှနျဒုံးတှဟော ခံစားမှုအရှိနျမွငျ့စခေငျြတဲ့အတှကျ ပါးနိုငျသမြှပါးအောငျထုတျလုပျပါတယျ။ ဒီ့အတှကျ ပေါကျပွဲသှားနိုငျမှာကိုအသုံးပွုသူတှကေ စိုးရိမျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပေါကျပွဲနိုငျခွငျးဟာ ပါးခွငျးထူခွငျးနဲ့မဆိုငျဘဲ အသုံးပွုပုံနညျးစနဈမှားယှငျးခွငျးနဲ့သာဆိုငျတယျလို့ ထုတျလုပျသူတှကေဆိုကွပါတယျ။
၇. အဖုအထဈပါသော ကှနျဒုံး ( Dotted/Ribbed Condoms)
အခြို့ကှနျဒုံးတှဟော ကိုယျ့ရဲ့အမြိုးသမီးဆကျဆံဖျောရဲ့စိတျဆန်ဒပိုမိုကနြေပျမှုရှိစဖေို့ရျရှယျပွီး အဖုအထဈမြားထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ ဒီအမြိုးအစားကိုအသုံးပွုမယျဆိုရငျသတိပွုရမှာကတော့ အခြို့အမြိုးသမီးတှဟော ဒီကှနျဒုံးကိုခံနိုငျရညျမရှိပဲနာကငျြမှုကိုခံစားရတတျတာပါပဲ။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ဆေးဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်၊ မီနီမတ်ကက်နဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်အချို့မှာ ကွန်ဒုံးအမျိုးအစား အစုံစုံအဖုံဖုံကိုတွေ့ရမှာပါ။ အတော်များများကတော့ ကွန်ဒုံးဖြစ်ရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးဝယ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကွန်ဒုံးတွေမှာအမျိုးအစားကွဲပြားမှုတွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်
၁. ရာဘာစေးဖြင့်ပြုလုပ်သော Condom (Latex Condoms)
လက်ရှိအသုံးအများဆုံးကွန်ဒုံးအမျိုးအစားပါပဲ။ ရာဘာစေးနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကွန်ဒုံးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်မရအောင် အကာအကွယ်တားဆီးရာမှာရော လိင်မှုဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများမဖြသ်အောင်ပါ အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဈေးကွက်မှာအသုံးအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂. ရာဘေးစေးဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်သောကွန်ဒုံး (Non Latex Condoms)
အချို့သူတွေဟာ ရာဘာစေးနဲ့ထိတွေ့ပါက ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ပြီး ယောင်ရမ်း၊ ယားယံခြက်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြသ်တတ်သူတွေအတွက် Polytheneနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ Non Latex ရာဘာစေးမပါသောကွန်ဒုံးတွေကိုထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ Polytheneဟာ Latexရာဘာသားလောက်မခိုင်ခံ့တာကြောင့် ပေါက်ပြဲတတ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ကို ၉၅ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
၃. သုက်ကောင်သေစေသောကွန်ဒုံး (Spermicidal condomd)
အချို့ကွန်ဒုံးတွေမှာ သုက်ပိုးကိုသေစေသောဓာတုပစ္စည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါဟာ အခန့်မသင့်လို့ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲပါက စိတ်ချရစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ကာကွယ်အားဟာ ၉၇ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတာမို့ Latex ရာဘာကွန်ဒုံးသီးသန့်တွေထက် ကာကွယ်အားလျော့နည်းတာမို့ Non Latexများမှာ တွဲဖက်အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။
၄. အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး (Female Condoms)
ကွန်ဒုံးဆိုတာ အမျိုးသားတွေအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Female condomsတွေရှိနေပါပြီ။ အမျိုးသမီးသုံးတွေဟာ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးတွေလောက် ကာကွယ်မှုရာခိုင်နှုန်းနည်းပေမယ့် (၉၅%) အကာအကွယ်မသုံးချင်တဲ့အမျိုးသားအဖော်နဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ချရအောင် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
၅. ချောဆီပါဝင်ထည့်သွင်းထားသောကွန်ဒုံး ( Lubricated Condoms)
ကွန်ဒုံးအချို့မှာ ချောဆီထည့်ပေးထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ လိင်ဆက်ဆံရအဆင်ပြေစေရုံရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ချောဆီပါတဲ့အခါ ကွန်ဒုံးမျက်နှာပြင်ပွတ်တိုက်မှု ချောမွေ့တဲ့အတွက် တော်ရုံနဲ့ပေါက်ပြဲခြင်းမရှိတော့ဘဲ အပြည့်အဝကာကွယ်မှုရစေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၆. ပါးပါးလေးအသုံးပြုချင်သူများ ( Ultra Thin)
အချိုကွန်ဒုံးတွေဟာ ခံစားမှုအရှိန်မြင့်စေချင်တဲ့အတွက် ပါးနိုင်သမျှပါးအောင်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ပေါက်ပြဲသွားနိုင်မှာကိုအသုံးပြုသူတွေက စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေါက်ပြဲနိုင်ခြင်းဟာ ပါးခြင်းထူခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘဲ အသုံးပြုပုံနည်းစနစ်မှားယွင်းခြင်းနဲ့သာဆိုင်တယ်လို့ ထုတ်လုပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။
၇. အဖုအထစ်ပါသော ကွန်ဒုံး ( Dotted/Ribbed Condoms)
အချို့ကွန်ဒုံးတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးဆက်ဆံဖော်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပိုမိုကျေနပ်မှုရှိစေဖို့ရ်ရွယ်ပြီး အဖုအထစ်များထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သတိပြုရမှာကတော့ အချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီကွန်ဒုံးကိုခံနိုင်ရည်မရှိပဲနာကျင်မှုကိုခံစားရတတ်တာပါပဲ။
LSCS scar tenderness